China Capsule tavoahangy PET Brown orinasa sy mpanamboatra | Qianduo fonosana
Ny tavoahangy plastika PET dia mitana toerana lehibe eo amin'ny tsena amin'ny ankamaroan'ny tsenan'ny fitoeran-javatra. Izy io dia tsy azo sarahina amin'ny tombony azo amin'ny tavoahangy plastika PET. Voalohany indrindra, ny fahamarinan-toerana momba ny tavoahangy plastika dia tsara, fanoherana ny hafanana, amin'ny mari-pana iray mba hitazonana ny fitoniana ara-materialy, indrindra indrindra ho an'ny fonosana sakafo. Faharoa, ny tavoahangy plastika biby dia mangarahara ary mitovy endrika amin'ny tavoahangy fitaratra, saingy maivana sy marefo izy ireo. Fahatelo, ny tavoahangy plastika biby dia mora vidy, izay mahavonjy ny vidin'ny fonosana. Farany, ny tavoahangy plastika biby fiompy dia manana endrika isan-karazany, izay afaka mamolavola endrika isan-karazany.
Tombony azo amin'ny tavoahangy PET
Brown Ny tavoahangy PET dia maivana sy mafy orina, ary ny tanjaka sy ny elitika dia avo kokoa noho ireo vita amin'ny akora plastika hafa. Ny tavoahangy polyester dia maivana sy mafy orina, ary ny tanjaka sy ny elitika dia avo kokoa noho ireo vita amin'ny akora plastika hafa. Izy io dia mahazaka fiatraikany be nefa tsy simba. Mety amin'ny fanaovana tavoahangy fonosana fanafody amin'ny rindrina manify, lanja maivana ary tanjaka lehibe. Raha toa ka mitovy ny habetsan'ny zava-mahadomelina, ny lanjan'ny tavoahangy PET dia 1/10 fotsiny amin'ny tavoahangy fitaratra; ny lanjan'ny tavoahangy PET misy savaivony ivelany mitovy dia 1,5 heny noho ny tavoahangy fitaratra. Tavoahangy volontsônaly mangarahara na manjavozavo dia azo atao amin'ny akora PET.
Endri-javatra amin'ny tavoahangy PET tsara
Matetika amin'ny fiainantsika andavanandro, ny bika plastika mahazatra matetika dia ny efa-joro, toradroa, boribory, ellipse, sns raha ny fijerintsika ny fampiasana azy dia tsy manam-paharoa ny tombony azon'izy ireo. Ny vatan'ny tavoahangy dia tokony hatsangana tsara, miaraka amin'ny mangarahara avo, tsy misy miboiboika, teboka mainty, tasy solika, fitaovana henjana, fanosotra, peratra mafy, atomisation ary fotsifotsy. Ny lokon'ny tavoahangy miloko dia tokony hitovy ary tsy misy fahasamihafana mazava loko. Ny tarehy faran'ny vavan'ny tavoahangy dia tokony ho fisaka, tsy misy fahasimbana sy fehy, miaraka amin'ny kofehy feno, kristaly feno, tsy misy fiparitahan'ny rano, sary, fiovana sy tasy menaka ao anatiny sy ivelany. Ny fanambanin'ny tavoahangy dia tokony hatsangana tsara, tsy misy fahaketrahana, mibontsina ary afovoany Ny fisehoan'ny tavoahangy plastika ara-pitsaboana feno biby dia afaka amin'ny fihenan-tsakafo sy ny fiovana, ny tavoahangy fisaka, ny fiovan'ny rindrina, ny ambany sy ny fahaketrahana. Ny vokatra dia madio, tsy misy fofona hafahafa, maina, tsy misy vovoka sy menaka ary tsy madio ao anatiny.
Teo aloha: Capsule PET Blue
Manaraka: Capsule tavoahangy PET Green